Vadzidzi veBhaibheri, kuma1870
Nharireyomurindi yokutanga, 1879
Bhaibheri rakafanotaura kuti pashure pekufa kwaKristu, vadzidzisi venhema vaizomuka pakati pevaKristu vokutanga uye voshatisa chokwadi cheBhaibheri. (Mabasa 20:29, 30) Izvozvo ndizvo chaizvo zvakazoitika nokufamba kwenguva. Vaisanganisa dzidziso dzaJesu nepfungwa dzezvitendero zvechihedheni, uye chiKristu chenhema chakabva chatanga. (2 Timoti 4:3, 4) Mazuva ano isu tingava sei nechokwadi chokuti tinonzwisisa zvinodzidziswa neBhaibheri chaizvo?
Nguva yakasvika yokuti Jehovha abudise chokwadi pachena. Akafanotaura kuti ‘munguva yokuguma, zivo yechokwadi yaizowanda.’ (Dhanieri 12:4) Muna 1870, boka duku revanhu vaitsvaka chokwadi rakaona kuti dzidziso zhinji dzemachechi dzakanga dzisiri dzemuBhaibheri. Naizvozvo, vakatanga kutsvaka kunzwisisa zvinhu chaizvo zvinodzidziswa neBhaibheri, uye Jehovha akavabatsira kunzwisisa magwaro.
Vanhu vakatendeka vakanyatsodzidza Bhaibheri. Vadzidzi veBhaibheri ivavo vakatitangira, vakashandisa nzira yokudzidza yatichiri kungoshandisawo nanhasi. Vaidzidza Bhaibheri vachiita zvokukurukura nyaya imwe neimwe. Pavaisangana nendima yeBhaibheri yainge yakaoma kunzwisisa, vaitsvaka mamwe magwaro kuti aitsanangure. Pavaisvika pamhedziso yaienderana nemamwe Magwaro ose, vaibva vainyora pasi. Saka nokurega Bhaibheri richizviturikira rega, vakawanazve chokwadi nezvezita raMwari noUmambo hwake, chinangwa chake nokuda kwevanhu nenyika, mamiriro ezvinhu evakafa uye tariro yerumuko. Kutsvakurudza kwavo kwakavasunungura padzidziso dzakawanda dzenhema uye pakuita zvinhu zvisiri izvo.—Johani 8:31, 32.
Pakazosvika 1879 Vadzidzi veBhaibheri vakanzwisisa kuti nguva yakanga yasvika yokuita kuti chokwadi chizivikanwe nevakawanda. Saka mugore iroro, vakatanga kubudisa magazini yatichiri kubudisa nanhasi, Nharireyomurindi Yokuzivisa Umambo hwaJehovha. Iye zvino tiri kuparidza chokwadi cheBhaibheri kuvanhu vari munyika dzinopfuura 240 uye mumitauro inopfuura 750. Zivo yechokwadi haina kumbobvira yawanika zvakanyanya kudai!
Kristu afa, chii chakaitika kuchokwadi cheBhaibheri?
Chii chakaita kuti tikwanise kuwanazve chokwadi cheShoko raMwari?